Aragtiyaha Xukuumadda Iyo Xisbiyada Mucaaridku Ka Bixyeen Go’aamadii Lagu Soo Afjaray Colaadii Ceel-Afweyn | Marsa News
Aragtiyaha Xukuumadda Iyo Xisbiyada Mucaaridku Ka Bixyeen Go’aamadii Lagu Soo Afjaray Colaadii Ceel-Afweyn
August 2, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Xukuumadda Somaliland iyo Hoggaamiyeyaasha labada xisbi mucaarid ee Ucid iyo Waddani, Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, ayaa aragtidooda ka dhiibtay go’aammada lagu soo afjaray colaadii daba-dheraatay ee mudada ka socotay deegaannada Ceel-afweyn ee gobolka Sanaag.
Ugu horeyn guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Waddani oo ka hadlay madasha ayaa yidhi; “Maanta reer Somaliland waxay ku farxayaan go’aankaa la gaadhay, laakiin farxadu waxay dhamaystirmaysaa marka la fuliyo.”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto cida waxyeelaysa heshiiskan laga gaadhay colaadii beelaha walaalaha ah ku dhexmartay deegaannada Ceel-afweyn, sidoo kalena
Eng. Faysal Cali Waraabe waxa uu soo dhaweeyay go’aamadii laga soo saaray, isla markaasina waxa uu ku taliyay in sharcigu shaqeeyo oo sida uu sheegay waxyaabo aan lagu darin go’aamadaasi oo uu soo jeediyay in dawlad iyo xukuumad ahaan loo baahan yahay in wax laga qabto, waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi.
Marka hore Alle ayaa mahad leh, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa ergooyinkii iyo culimadii iyo ergooyinkii kale ee u dhabar adaygay hawasha nabadaynta, sidoo kalena labada ardaana waan u mahadnaqayaa, sida gobonimada leh ee islaamnimada ah ee ay arrintoodii u dhamaysteen.
Waxaan filayaa go’aamada aad soo saarteen inaydaan aad u adkayn, maxaa yeelay colaadan waxa u asal ah waxa weeyi, waxa la isku haystaa waa hanta, waxa la isku haystaa biyo oo ceelashii baa la isku haystaa, oo qolona ceelashii bay fadhidaa, qolona magaalooyinkii bay fadhiyaan.
Waxa fiican ceelasha biyaha inay dawladdu la wareegto oo gacan dawladeed ay soo gasho si dadka ay uga dhaxayso, dhulka waa lawada leeyahay, hadday intaasi hore u garanayeen mabaanay kala sheegteen, laakiin waa in sharci lagu fuliyaa.
Mida kale ardaayada qaar ayaa ka maqan magaalooyinkii, intiinani haddii aad ku heshiiseen in lawada noolaado, dadka in kale ayaa maqan, oo maanta waxa dhici karta dhalinyaradu sidoo hore maaha oo qaar baa hadalkaniba aanu gaadhayn ama raaliba ahayn, markaa waa in aan laga tegin dadkii si magaalooyinkii loogu soo raro.” Ayuu yidhi Eng. Faysal Cali Waraabe
Geesta kale Wasiirka ciyaaraha Somaliland Boos Mire Maxamed iyo wasiirka xannaanada xoolaha Xasan Gaafaadhi oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay go’aamada lagu soo afmeeray colaadii daba-dheraatay ee mudada ka socotay deegaannada Ceel-afweyn, sidoo kalena ku baaqay in laga digtoonaado wax kasta oo wax yeelaynaya nabadaasi maanta lagu soo dhameeyay dirirtii beelaha Ceel-afweyn. “Halkan waxaan kala hadlayaa oo kaliya oo hadhay, nimanka Media-ha, waxaan leeyahay waa la heshiiyay, reer Ceel-afweyn waa heshiiyeeyn, wixii aad ka qori jirteen, adeerow naga joojiya Alle kheyr ha idin siiyee.” Ayuu yidhi Wasiirka ciyaaraha Somaliland Boos Mire Maxamed
“marka waxaan odhan lahaa, inayny iska illaalino oo aynu iska dayno, bal wixii hore sidii loo gali lahaa aan ka tashanee, wax dambe oo cusub inaynaan samayn.” Ayuu yidhi wasiirka xannaanada xoolaha Xasan Gaafaadhi